Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Kormeerka Guddiga JOKA oo lagu qabtay magaalada east London ee xarunta Faranca Siskay
Shirkii Kormeerka Guddiga JOKA oo lagu qabtay magaalada east London ee xarunta Faranca Siskay
Shirkan oo ay yeesheen maamulka Faraca, xubnaha iyo waftigii ka socotay Xarunta Jaaliyadda, waxaana Shirka lagufuray wacdi diini ah oo uu soojeediyay Hogaanka dacwada Sh Abuu bakar. Wuxuu Sheekha ka hadlay Cabsida alle. Wacdigaa ka dib, waxaa shirka Warbixin Waafi ah kasoo jeediyay Hogaanka warfaafinta Jaaliyada Mudane Cabdiraxmaan Saciid.
Wuxuuna ka warbixiyay deegaanta, dacatiga, dagaalada, siyaasada, iyo xaalada cadawa Wuxuuna hogaanku si qododheer uga hadlay khilaafka hadheeyay dhamaanba maxaysatada EPRDF Iyo guud ahaanba Ethiopia wuxuu intaas kudaray qorshaha Ethiopia ee ku aadan shidaalka Ogaadeeniya.
Waxaa sidoo kalle warbixin waafi ah oo kusaabsan Jaaliyada Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika soo jeediyay Hogaanka Abaabulka Mudane Yuusuf Islaam oo faah faahiyay Ujeedada Socdaalka Waftiga uu hogaaminayay masuulkani.
Intaas kadib waxay xubnuhu soo jeediyeen Fikrado wax ku ool ah Waxaana Shirka Daadihinayay gudoomiyaha Faraca Siskaay Mudane Sh Maxamuud Sh Cabdulaahi. Shirkan markuu soo dhamaaday ayaaa salaadii maqrib markii latukaday kulan lasii qorsheeyay loo qabtay Odayaasha Magaalada waxaana Khadka Teleefoonka kaga qayb galay Xeer ilaaliyaha Guud Ee JWXO Mudane Maxamed Shariif. Wuxuuna masuulku uga warbixiyay odayaasha xaalada Ogaadeeniya iyo halganka doorka ay odayaashu kuleeyihiin Waxaana Masuulka lawaydiiyaya Su aalo Muhiim ah Wuxuuna uga jawaabay si xikmid ey aqoon iyo waaya-aragnimo ay ku dheehantahay.
Gaba gabadii waxay odayaashu Garwaaqsadeen Dhibaatada baahsan eeEthiopiaku hayso Shacabkooda waxayna balan qaadeen In ay iska Caabinayaan Cadawga madaw ee gardarada ku jooga Ogaadeeniya.
Sidoo kalle Waftigan oo kormeer hawleed kujooga Gobolada qadanka ayaa abaabulkan sii wadi doona in sha allaah. Shirarkan ayaa Guul iyo is afgarad wanaagsan kusoo dhamaaday kusoo dhamaaday.